Ntuziaka 3 maka ndị ahịa iji chekwaa okwuntughe mgbasa ozi mmekọrịta ha Martech Zone
Maka izu gara aga, anyị na-anwa ị nweta paswọọdụ maka onye ahịa Youtube akaụntụ. Onweghi ihe na - eme ka oge ma ọ bụ oge ju mmadụ iwe karịa ime nke a. Nsogbu bụ na onye ọrụ nke naanị jikwaa akaụntụ ahụ hapụrụ ụlọ ọrụ na mberede - na ọ bụghị na usoro kachasị mma. Anyị mere ike anyị niile dịka onye ogbugbo iji gbalịa weghachite paswọọdụ ahụ, mana ha kwuru na ha amaghị ihe ọ bụ ọzọ.
N'ezie, Google anaghị enyere aka ịjụ ajụjụ nyocha dị ka ọnwa na afọ ị mepere akaụntụ ahụ, ajụjụ nzuzo (nke onye ọrụ gị na-anọghị ebe ahụ) wee nye gị ịme ederede ederede… gaa na mpaghara ụlọ ọrụ nke ahụ enweghị ike ịnabata ha.
Ma ọ dịkarịa ala, anyị maara na akaụntụ ahụ dị nchebe ma ghara ịnweta. Ọnọdụ kachasị njọ ga-abụ akaụntụ echekwara ebe enweghị ike iweghachi ya n'okpuru njikwa akara ahụ. Trusttụkwasị obi bụ akụkụ dị oke mkpa nke azụmahịa ọ bụla n'ịntanetị, yabụ ịhụ akara ka akpachara anya nwere ike inwe mmetụta dị egwu. O zughi inye ya mgbaghara ọzọ - ịkwesịrị ịrụ ọrụ iji gbochie ya. Lee ụzọ 3 anyị na-akwado izere ị nweta akaụntụ ahịa gị:
Jiri Nyocha Ekwentị - Nyocha ekwentị ma ọ bụ Nkwenye nzọụkwụ 2 dị ugbu a na saịtị ọ bụla dị mkpa (Twitter, Facebook, Google, LinkedIn). N'ụzọ bụ isi, mgbe ị si nbanye site na ngwaọrụ ọhụrụ (ma ọ bụ mgbe ụfọdụ ngwaọrụ ọ bụla), ezitere gị koodu ọzọ iji kwado site na ozi ederede ma ọ bụ email. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ka mmadụ gbanwee ma ọ bụ mbanye anataghị ikike paswọọdụ gị na akaụntụ mmekọrịta, ha ga-achọ ịnweta ekwentị mkpanaaka ejiri maka nkwado. M na-eji ya ebe ọ bụla m nwere ike. Y’oburu n’inwe otutu ndi mmadu ka ha na eme otu akaụntụ, ugbua inwere onye etiti ekwuputala ya.
Jiri Ngwa nke Ndi Atọ nke Atọ - Zere ikesa ndị ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ekesa paswọọdụ gị kpamkpam site na iji ngwa nke ndị ọzọ iji bipụta ya na akaụntụ ahụ. Anyị na-amasị Hootsuite. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịgbakwunye ma wepu ndị ọrụ ngwa ngwa na akaụntụ, ma ọ bụ nweta akaụntụ ndị ahịa, na-enweghị ịma paswọọdụ ha ma ọ bụ nye nke anyị. Ọ bụrụ na ha otu mbanye anataghị ikike gị na-atọ ndị ọzọ na akaụntụ, ọ dịkarịa ala ha na-enweghị ike hi-Jack gị isi na-elekọta mmadụ na akaụntụ! I nwekwara ike na-esochi intrusion dị mfe nye onye bipụtara ya ma wepu akaụntụ ha ngwa ngwa. Youtube nwere ikike nke ndị njikwa, dịkwa ka Facebook maka Azụmaahịa. Ọ bụrụ na onye were gị n'ọrụ ma ọ bụ gị n'ụlọnga doo… dị nnọọ dobe ha si ohere ndepụta.
Jiri Paswọdu Manager - Itinye n'ọrụ nke ngwa ọrụ ijikwa okwuntughe abụghị naanị ime ka ọ dị mfe nbanye, ọ bụ iji okwuntughe siri ike, okwuntughe dị iche iche maka ọrụ ọ bụla na ịgbanwe nke ọ bụla n'ime ha mgbe niile. Anyị hụrụ n'anya Dashlane ma kwado ya nke ukwuu - ha nwere ngwa mgbakwunye ihe nchọgharị, ngwa mkpanaka, na nnukwu atụmatụ. Ha ga-ọkwa ọkwa paswọọdụ gị (ma ọ bụ họrọ otu maka gị). Anyị kachasị hụ ike nke ịkekọrịta okwuntughe maka weebụsaịtị yana enweghị oke. Onye ọrụ nwere ike nbanye site na iji usoro Dashlane mana enweghị ike ịhụ paswọọdụ.
Hapụ ịnweta akaụntụ mgbasa ozi gị na-eme ihere na isi ọwụwa na-enweghị isi n'agbanyeghị agbanyeghị onwe gị ma ọ bụ onye ọrụ kwụsịrị, ma ọ bụ hapụ ya ma ọ bụ chụọ ya. Oge, mgbalị, na nkụda mmụọ iji nwaa iweghachite akaụntụ gị agaghị aba uru itinye nkesa okwuntughe dị mfe maka n'ime na mpụga. Zere ime ka ọ dị mfe site na iji ndị njikwa okwuntughe, nyocha abuo abụọ, yana ike ọrụ.
Tags: dashlanehootsuiteokwuntughesecurityokwuntughe mgbasa ozi mmekọrịta